ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း အကျိုးဆောင်၏ ၉နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကို FBSမှ ကျင်းပနေပါပြီ
FBS၏ ၉နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပတော့မည့်အကြောင်း ကြေညာပြောကြားခွင့်ရသည့်အတွက် လွန်စွာမှ ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိပါသည်! ကုမ္ပဏီစတင်တည်ထောင်ချိန်မှစပြီး စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်လာခဲ့ပြီး တိုးတက်သထက်တိုးတက်အောင် ကြိုးစားအားထုတ်နေကြတာ ဖြစ်ပါသည်. ယခုအခါ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ထရိတ်ဒါပေါင်း ၆ ၀၀၀ ၀၀၀ ကျော်ရှိပြီဖြစ်ပြီး အင်အားကြီးသည့် ရပ်ဝန်းတစ်ခုဖြစ်လာနေပြီဖြစ်ပါသည်.
မိတ်ဆွေများ၏ ယုံကြည်ပေးမှုနှင့် ကျွန်ုပ်တို့အပေါ် သစ္စာရှိမှုမှုများအပေါ် အလွန်ကျေနပ်ဝမ်းမြောက်မိပါသည်. ယခုကဲ့သို့ - အရေးပါသည့် "FBS: ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းအကျိုးဆောင်၏ ၉နှစ်ပြည့်" မွေးနေ့ပရိုမိုးရှင်းတွင် ပါဝင်ဆင်နွှဲပြီး ဆုလက်ဆောင်များ ရယူစေလိုပါသည်!
သင်လုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များမှာ FBSကို ဘာကြောင့် နှစ်သက်ကြောင်း ရေးသားပြီး သင့်ဖေ့ဘုတ်စာမျက်နှာတွင် ဝေမျှပေးကာ ငွေသားဆုနှင့် နောက်ဆုံးပေါ်ပစ္စည်းများကိုရယူလိုက်ပါ. (နောက်ဆုံးပေါ် အက်ပဲလ် နှင့် ဆမ်ဆောင်းများ၊ ဒရုန်းများနှင့် အခြားအထူးဆုများပါဝင်ပါသည်).
ပရိုမိုးရှင်းတွင် လူတိုင်းပါဝင်ဆင်နွှဲခွင့်ရှိပါသည် - အသေးစိတ်ထပ်မံသိရှိလိုပါက သင့်ရဲ့ ပါစင်နယ်ဧရိယာသို့ သွားရောက်ဖတ်ရှုလိုက်ပြီး FBSနှင့်အတူ ကမ္ဘာကြီးကို ဦးဆောင်လိုက်ပါ!